Tourism – Page2– CEO Business & Management Magazine
ဥရောပသို့ခြေဆန့်လာသည့် အာရှလုပ်ငန်းစု Central Group
Central Group စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်းစုတွေဖြစ်တဲ့ Central ၊ Robinson နဲ့ Zen Department Store တွေကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လက်လီကုန်တိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ Central Group ဟာ မကြာသေးတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ဥရောပကို လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ပြီး ကမ္ဘာ့စင်မြင့်မှာ ၀င့်ထည်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။ Central ရဲ့အစ . . . ဟိုင်နန်ကျွန်းကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကို စွန့်စားရောက်ရှိလာတဲ့ Tiang Chirathivat ဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ ကုန်မျိုးစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို ဘန်ကောက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ Tiang Chirathivat မှာ ဇနီးသုံးဦးရှိပြီး သားသမီး ၂၅ ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ နောင်ဆယ်နှစ်ကြာ […]
Posted On November 29, 2016, By Editorial
နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို မြန်မာဘဏ်တွေနည်းတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ပြောပြပေးပါ . . .
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အရှိန်အဟုန်မြှင့်လို့ရှိရင် နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို လိုင်စင်ပေးရမယ်။ အခုလက်ရှိမှာ သူတို့ကို လက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ခွင့်မပေးဘူး။ သူတို့အလုပ်တွေကို အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွေမှာ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံခွင့်ပေးတယ်။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကို ကာကွယ်ထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်အခါကျရောက်လာရင်တော့ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးရမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုခွင့်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့အားက နည်းတဲ့အားမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ အရင်းအနှီးအား၊ နည်းပညာအား၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအား၊ ဈေးကွက်အားတွေက မနည်းတော့ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေအနေနဲ့က ယှဉ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကို ရုန်းကန်ကြိုးစားရမှာပါ။ ဒီတော့ ယှဉ်ပြိုင်မလား၊ မပြိုင်ဘူးလားဆိုတာကလည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာ လက်မခံနိုင်တာတွေရှိတယ်။ စင်ကာပူလိုနိုင်ငံကတော့ ပြောင်းလဲမှုကို အစပိုင်းမှာကတည်းက လက်ခံလိုက်တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဆိုရင် လက်မခံဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာပဲ […]
Posted On November 28, 2016, By Editorial
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သြစတြေးလျ သွားမယ်ဆိုရင်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း အနည်းငယ်နားလည်တာဟာ ယင်းနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေး ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ခရီးတွင်စေပါတယ်။ သြစတြေးလျ လူမျိုးတွေနဲ့အတူ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရာမှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို သတိပြုစေလိုပါတယ်လို့ Austrade Yangon ရဲ့ Senior Trade Commissioner ဖြစ်သူ Ross Bray က ပြောပြထားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းအလေ့အထ . . . ပထမနာမည်ကို စီးပွားရေးနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ သုံးကြပါတယ်။ ယေဘုယျအနေနဲ့ ပထမနာမည်နဲ့ အစပြုဆက်ဆံရေး ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နှုတ်ဆက်ရာမှာ ပြုံးတာ၊ မျက်လုံးချင်း ဆုံအောင်ကြည့်တာနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေက အမျိုးသားအတွက်ရော အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါ သင့်တော်ပါတယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သေချာကိုင်ဆွဲပြီး လျင်မြန်တိုတောင်းတဲ့ အပေါ်အောက်လှုပ်ရှားမှု ပုံစံမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တခြားသူရဲ့လက်ကို ဆွဲညှစ်ဖို့ မလိုအပ်၊ […]
Posted On July 8, 2016, By Editorial
၂၀၁၅ ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေက လေ့လာနိုင်တဲ့ အချက် ၆ ချက်
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံ GDP အတွက် အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၀င်ငွေကောင်းကောင်း ရှာပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေ၊ ခမ်းနားပြီးအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ အပန်းဖြေစခန်းတွေ၊ ပျော်စရာတွေပြည့်နေတဲ့ ပွဲတော်တွေက သန်းနဲ့ချီတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ပုံမှန်ထက်နိမ့်ကျနေတဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေမှာတောင် ဆက်လက်ပြီး ဘယ်လိုရပ်တည်အောင်မြင်နေလဲဆိုတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိန်းဂဏန်းတွေထဲက အရေးပါတဲ့ ကိန်းဂဏန်း တချို့ကတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာခြောက်ခုကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလကနေ မေလအတွင်း ခရီးသွားဧည့်သည် ၁၂ .၄ သန်း ရှိပါတယ်။ Songkran ပွဲတော် (ထိုင်းသင်္ကြန်ပွဲတော်) ကို ဧပြီလမှာ ကျင်းပပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာ သူတို့နိုင်ငံကနေ အအေးရှောင်လိုတာကြောင့် […]
Posted On July 5, 2016, By Editorial
ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်
ထိုင်းနိုင်ငံကို စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားမယ့်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ့် စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေနဲ့ အခြားသိထားသင့်တဲ့အချက်တချို့ကို Kasikorn Bank ရဲ့ Chief of Representative (Myanmar) ဖြစ်တဲ့ Nuttaphong Visitkitchakarn က ပြောပြထားပါတယ်။ Nuttaphong Visitkitchakarn ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ အခုဆိုရင် လေးနှစ်နီးပါး ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ Appointment တောင်းမယ်ဆိုရင် . . . အီးမေးလ်ပို့ပြီး Appointment တောင်းနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်တာမျိုးတွေနဲ့လည်း Appointment တောင်းနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် Head of Department ၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုင်ရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သူတို့မှာ Assistant တွေ ရှိတတ်တာကြောင့် […]
Posted On June 20, 2016, By Editorial
ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်စနစ်နဲ့အညီ ကိုယ့်လုပ်ငန်း နောက်ကျန်မနေခဲ့ဖို့နဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ စီးပွားရေးအလားအလာတွေကို သိရှိဖို့အတွက် CEO မဂ္ဂဇင်းကကြီးမှူးတဲ့ Potential Economic Miracles of Myanmar ခေါင်းစဉ်နဲ့ Panel Discussion ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Chatrium Hotel မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ စီးပွားရေးအကြံပေး ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က Moderator အဖြစ် ဦးဆောင်ပြီး Deloitte Consulting Myanmar ရဲ့ Executive Director ဦးချစ်ထွန်းဖေ၊ Myanmar Information Technology ရဲ့ Managing Director ဒေါက်တာထွန်းသူရသက်၊ Myanmar Voyages International ရဲ့ Managing […]
Posted On April 25, 2016, By Editorial
ဦးသက်လွင်တိုး Managing Director Myanmar Voyages International Tourism Co Ltd Tourist က ၂၀၁၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ တက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ Tourist နှစ်သန်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ သုံးသန်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကုန်မှာကျတော့ ခန့်မှန်းထား တာက ၄.၅ သန်းပါ။ တကယ်ဖြစ်သွားတာကတော့ ၄.၆၈ သန်းထိ တက်သွားပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ ၅.၅ သန်းရောက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရေအတွက်က နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေကော၊ လေကြောင်းတွေအပြင် Caravan Tour တွေပါ ရောထားတာဆိုတော့ ပြန်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာရင်းအရ ၁.၃ သန်းပဲ လေယာဉ်တို့၊ သင်္ဘောတို့နဲ့ လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့သုံးသန်းကျော်လောက်က ဘယ်မှာလဲဆိုတာ […]
Posted On March 7, 2016, By Editorial
ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက် Multi Entry Visa အစီအစဉ် ထိုင်းနိုင်ငံစတင်ပြုလုပ်
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက် multiple-entry visas တွေ ထုတ်ပေးပြီး နိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Tourism Minister Kobkarn Wattanavrangkul က Prime Minister Prayut Chan-ocha က ဒီအစီအစဉ်ကို ဆက်လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ Cabinet ရဲ့ approve ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာမှာ ဒီအစီအစဉ်က စတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကို နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ၊ ၄၀ လောက်က visa မလိုဘဲ ၀င်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပြီး၊ တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ ရက်ပေါင်း ၃၀ နေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ single entry visa ရဖို့ ဘတ် ၁၀၀၀ ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Kobkarn က […]
Posted On August 15, 2015, By Editorial
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၊ Kempinski ဟိုတယ်တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း conference ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီ conference ကို ၂ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒီအခမ်းအနားကို မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမှာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဌေးအောင်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းအောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကံဇော်၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးတို့မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ conference မှာတော့ Hospitality & Tourism Industry မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ […]
Posted On June 9, 2015, By Editorial